Shoes for women | Fashion ... Mapeji evaravara ehurukuro
Sei mabheti akatengwa asingawanzoputi?
Zvigaro zvakakodzera - kunyange nekuwedzera
Zvishongo zveItaly zvine tsika yakareba
Chii chinoita kuti shangu dzeItaly dzakasiyana nevamwe?
Vakadzi shangu paziso
Vazhinji vakadzi vane dzimwe shangu dzakawanda kupfuura varume, asi sei vakasiyiwa muimba yekambani kwenguva yakareba vasina kupfeka? Semuenzaniso, kuongororwa kwepaIndaneti kwakawanikwa kuti vakadzi vanowanikwa kaviri kana kupfuura kaviri shangu sevarume.
Vakadzi neShokwe - Imwe yemapuzzles makuru ezvose
Mumabhandi emabhandi evakadzi, maererano nekuongororwa kwembatya dzeS17, varume vacho vanongova nehumwe 8. Asi nei zvakadaro? Ndicho chikonzero nei vakadzi vachida kuenda kunotenga? Zvechokwadi ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvekusiyana kukuru, asi maererano nevanofunga nezvepfungwa kune chimwe chinhu chakasiyana chakavanzika.
Vakadzi uye shangu
Sei vakadzi vakawanda vakapfeka shangu?
Kwete kungoti chikwata chehomwe dzevakadzi chinowanikwa muongororo, asiwo chokwadi chokuti shangu dzakawanda hadzina kupfeka zvachose. Vakadzi vanoda kuenda kunotenga, uye kana vachida kuchinja kana vane matambudziko, gear yekutanga inowanikwa mune mall.
Ichokwadi chokuti vanowanzozvitenga shangu asi havazvipfeke zvakaoma kuti munhu anzwisise. Nokuti izvi zvinonyadzisa pane kutengesa uye kurega manzwiro avo nemanzwiro avo pane dzimwe nguva, semuenzaniso, munguva yemitambo kana bhodhoro rewaini pavanotarisa bhora nemapal.
Nokutenga shangu idzva, vanogona kurondedzera hope dzavo nemanzwiro avo. Izvi zvakafanana nekushandurwa kwebvudzi, iyo inowanzoitwa nevakadzi kana vachida kuchinja.
Asi nei vakadzi vakawanda vasingashambi shangu dzavo? Maererano nenyanzvi yepfungwa, chinangwa cheshuga hachisi chokupfekedza, asi kuva nacho uye kuvatsinhanisa pavanenge vaine shungu. Kungofunga kuti kunzwa kweshangu itsva kunokosha kwazvo kuvakadzi.
Mukuwedzera, chikonzero chekutenga shangu idzva, kutevera zvinoitika. Saka zvingadaro ndezvokuti munhu akakurumbira paTV akapfeke shangu kubva pane zvitsva zvekugadzirwa kunozivikanwa uye mudzimai wako anoda kuva neicho chaiyo. Ikoko, zvakare, varume nevakadzi vanosiyana, nokuti varume kazhinji havatarisi kuti ndiani anoteera chii paTV uye kana itsva inoungana yakauya pamusika.
Chimwe chikonzero chehombe dzevakadzi ndeyekuzvipira ivo pachavo. Somuenzaniso, kana kukanganisa kunokosha kwakakundwa, zvakadai sekubudirira kupfuudza kuongorora kana kubudirira.
Mumwe angashamisika kuti nei iri zvicheche izvo vakadzi vanotenga kana vachida kuchinja. Izvi chaizvoizvo zviri nyore kutsanangura, nokuti shangu nguva dzose dzinokodzera, kunyange kana uremu hwawedzera.
Zvipfeko, jeans kana zvigwenga, kune rumwe rutivi, zvingave zvakaoma zvakanyanya, izvo zvinogona kukonzera kushungurudzika. Mukuwedzera, hakusi zvechokwadi iyo inotyisa dambudziko nzvimbo kumakumbo. Uye kana nzvimbo isiri yakanaka kwazvo, shangu dzakapfigwa dzinogona kutengwa.
Sei mapurumu uye zvitsitsinho zvakakurumbira zvakadaro?
Mukuwedzera kune zvakasiyana nezvimwe zvehombodo, mapampu uye zvitsitsinho zvakakwirira zvinonyanya kufarirwa nevakadzi. Vanoita kuti makumbo avere uye akareba, chokwadi chinonyanya kukosha kuvakadzi. Nokudaro pfungwa shomanana yekupembera inouya, yakafanana neyekuti nyeredzi dziri pamubhedha mutsvuku dzinopedzisira sei, kunyange kana dziri mune iyi nyaya dzakawanda dzedzimba dzavo.
Itaria ndeimwe yemarudzi ane nhoroondo refu muhomwe yekugadzira. Nehanya kwakanyanya, shangu dzeItaly dzinobudiswa nemunhu. Pakutanga, kwaingova mapaviri asina kuroorwa akabudiswa nevashambadziri veItaly vashoma.
Zvishongo zveItaly zvinoratidzwa nekukwirira
Nhasi, ivo vanogadzirwa nemichina nekuda kwezvikonzero, asi kunyange idzi pallets dzichiri kugadzirwa nechetsika yeItaly rudo uye kutarisira zvipfeko. Mutengi wacho anobva kumativi ose enyika. Kana iwe usingadi kutenga shangu zvakananga kuItaly, unogonawo kutarisa paIndaneti kana kuedza mabhoti eItaly akakwirira, shangu, shandi-soro, etc. mune imwe nzvimbo yekutengesa dhipiki parikona.
Zvishongo zveItaly zvave zvichange zviri zvehutano hwakanaka. Zvinoshandiswa zvakakwana. Kusarudzwa kwechekete kunowedzerawo hupenyu hurefu hwakareba. Mhando dzakanaka dzenguva isina nguva dzakakwana kune bhizimisi kana chipfeko chamadekwana. Mukuwedzera kune shangu idziwo zvakare mbatya dzeChic kubva kuItaly, iyo inofungidzirwa nyika inotangira mafashoni. Saka, kunyanya zvipfeko uye shangu dzemakwenzi anozivikanwa, zvakadai saGucci kana Prada zvakakurumbira. Asiwo vakaroorana vaSalvatore Ferragamo naBruno Magli vanoita kuti mwoyo irove zvikuru vakadzi.
Mhemberero yeItaly shoe inogona kurondedzerwa mumashoko mashomanana: high quality, yakanaka, yakanaka. Vatengi munyika yose vanovimba ne "Made in Italy" shangu. Munguva yakapfuura, shangu idzi dzaiva chiratidzo chaicho chaiyo, nhasi vatengi vari kutarisira mberi basa rakanaka. Pane imwe nguva yaive nevakuru vakanaka vairatidza pfuma yavo uye mukurumbira nehombodo dzeItaly. Kunyange zvakadaro, mienzaniso yakagadzirwa nemhuru yakanakisisa kana mbudzi yeganda, iyo inofungidzirwa yakareba kwazvo, isinganzwisisiki uye inofema.
Varume pamwe chete nevakadzi vanobatana neItaly asiwo chido, manzwiro uye kukwezva. Pasinei nokuti vatengi vanosarudza mashizha emitambo, flaterinas flat, mashesi akakurumbira kana sexy sexy zvitsitsinho, zvose zvinoratidza chimiro cheItaly chimiro. Nyika haina kurega kuwedzera kwenguva yakareba. State-of-the-art yekugadzira nzira dzinoita kuti zvipfeko zvigone kubudiswa zvakagadzirirwa kune tsoka dzevatengi. Sezvokuzorora uye sehombodo yebhizimisi, mhando kubva kuItaly dzakanaka sepakati pemapati.
Mashizha e-coloring evanhu vakuru - vakadzi
Hora mifananidzo yakaita sevakadzi vakadzi
Kutora mifananidzo yakaita mifananidzo vakadzi vakaroorana vanoita zvepedyo
Coloring page female
Hora mifananidzo yakaita sevakadzi vari murudo
Coloring page Tender women
Coloring peji mafashoni - muenzaniso mumasikati emasikati
Coloring page mafashoni manheru apfeke
Coloring page mafashoni girazi